ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မရောင်ရာဆီလူး ဘနဖူးသိုက်တူးမယ့်သူတွေ
Aung Hmine's Article (16!7!2013) by ko latt
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 6:36 PM
ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသီးသီး ပြည်ပကို အဖြေရှာဖို.လား ၊တိုင်းပြည်ကောင်း
ဖို.လား ၊အခွင်.ရေးရတုန်း အလည်ထွက်တာလား ၊ အဆက်မပြတ် ထွက်နေကြပေမယ်. စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေလာရေး မျှော်.လင်.နေကြတဲ.ပြည်သူတွေမှာတော.
ကျပ် သထက် ကျပ် ပြီး ငတ်သထက်ငတ်လာနေကြတယ် ၊
စားစရာမရှိလို. ၊ လျော်စရာမရှိလို. ၊ဆေးကုစရိတ်မရှိလို.
မိမိကိုယ်သတ်သေ (Suicide) လုပ် လာမှုတွေ တနေ.တခြား ပေါများလာနေတယ် ၊နိုင်ငံရဲ.ငွေ တန်ဘိုးကျလာနေတယ် ၊ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတက်လာနေတယ် ၊
လူသတ်မှု ၊လုယက်မှုတွေ ပိုများလာနေတယ် ။
အလုပ်အကိုင်တွေရှားပါး လာပြီး လူငယ်တွေ နည်းမျိုးစုံနဲ.ပျက်စီးလာကြတယ် ။
Suicide လုပ်တယ်ဆိုတာ လူတယောက်ရဲ.ဘ၀ မှာအခက်အခဲဆုံးပါ ၊
လောကကြီးကိုဖြတ်သန်းဖို. မတတ်နိုင်တော.လို.ပါ ။
.. တိုင်းပြည်မှာအရေးအကြီးဆုံးက (ကျန်တာတွေအသာထား) အောက်ခြေလူတန်းစားတွေရဲ. ဘ၀ရပ်တည်နိုင်ရေးပါ ။
နိုင်ငံရေးသမားတွေ theory တွေ ၊ အမှန်တရား တွေ
မိန်. နေတာကလွယ်ပါတယ် ။
ဆင်းရဲမွဲတေ ငတ်မွတ်လို. Suicide လုပ်သူများရဲ. ဘ၀
တွေကို လေ.လာစာနာ နိုင်ကြဖို.မျှော်လင်.ပါတယ် /